Local Media - सातदोबाटो - चापागाउँ सडक, धुवाँधुलो अति भो ! ठेक्का भको कति भो ?
सातदोबाटो - चापागाउँ सडक, धुवाँधुलो अति भो ! ठेक्का भको कति भो ?
प्रकाशित समय: शुक्रवार, ०३ : १८ बजे बैशाख २७ गते
केदारनाथ दाहाल,ललितपुर,ठेक्का भएर वर्षौ बितिसक्दा समेत चापागाउँ सडक कालोपत्रे नभएपछि त्यहाँका स्थानीय विरोधमा उत्रिएका छन्। तीन वर्षदेखि अलपत्र अवस्थामा रहेको चापागाउँ सातदोबाटो सडक अहिलेसम्म पनि मर्मत नभएपछि स्थानीय विरोधमा उत्रिएका हुन्।
सडकका विषयमा निर्माण जिम्मा पाएका ठेकेदारसँग पटकपटक छलफल भएपनि सडक निर्माणको काम सुरु नभएपछि स्थानीय आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य भएको चापागाउँका स्थानीय उमेश कायस्थले बताउनुभयो।
धुवाँधुलोले हैरान भएका स्थानीय बासिन्दाले समयमा नै सडक मर्मत नगरे थप आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्। स्थानीय बासिन्दाले सडक मर्मतको माग गर्दै हिजो र आज चापागाउँ क्षेत्रमा १ घण्टा सडक बन्द गरेका थिए।
स्थानीय बासिन्दाले सडक मर्मतको काम भोलिदेखि सुरु नभए चरमबद्धरुपमा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए।
यसैबीच गोदावरी नगरपालिकाका मेयर गजेन्द्र महर्जनले अबको एक हप्ताभित्र सडक मर्मत सुरु गरिने जानकारी दिनुभयो। उहाँले सडक विस्तार गर्ने जिम्मेवारी पाएको ठेकेदार कम्पनीसँग छलफल पछि अहिले जे जस्तो अवस्था को सडक छ, त्यसैमा कालोपत्रे सुरु गर्ने गरी काम अगाडि बढाइने जानकारी दिनुभयो।
सडक आसपासका स्थानीयले क्षतिपूर्ति र मुआब्जा समयमा नै नपाएपछि सडक विस्तारको काम रोकिएको भएपनि क्षतिपूर्ति र मुहाब्जा पाएपछि बाँकी काम अगाडि बढाइने मेयर महर्जनले बताउनुभयो।
उहाँले भन्नुभयो- "अब त्यस क्षेत्रमा अहिले जे जस्तो अवस्था छ त्यही अवस्थामा सडकको कालोपत्रे र मर्मत कार्य सुरु हुन्छ"।
उहाँले नगरपालिकाको बोर्ड बैठकले सडक मर्मतको काम आफै गर्ने निर्णय गरेको भएपनि सडक विभागले गर्न नदिएका कारण यस क्षेत्रमा काम रोकिएको बताउनुभयो।
उहाँले उक्त सडक मर्मतको काम एक हप्ता भित्र सुरु नगरे स्थानीयको माग प्रति एक्यवद्धता जनाउदै स्थानियसँग मिलेर आफै पनि आन्दोलनमा जान तयारी रहेको बताउनुभयो।